Aragtida iyo dhismaha matoorrada guryaha lagu sameeyo iyo kuwa warshadaha - Ikkaro
Waxaan fureynaa qeyb cusub, si aan uga hadalno matoorada.
Waanu raadin doonaa oo sharxi doonaa sida ay u shaqeeyaan iyo sida aad u dhisi karto matoorrada kuleylka iyo korontada.
Laga soo bilaabo Mashiinnada kiciya taas oo aan aad u xiiseynayo ilaa matoorro batari fudud ku shaqeeya iyo fur. Talooyinka waa la soo dhaweynayaa.
Beryahan waxyar baan qoraa laakiin haa Patelo wuxuu soo saaraa mashiin cusub, tan waa in dib loo eego. Waxaan ku arkaa warka ku jira Olol 1 sano oo shaqo ah, 2520 saacadood si loo dhiso yaabkan.
Kuwa aan aqoon isaga, Patelo (José Manuel Hermo Barreriro) waa a 75 jir Makaanik ah, wuxuu howlgab noqday, oo caan ku noqday matoorada ay soo saarto.
Patelo W-32 Mashiinka
32-kii dhululubade ee ugu dambeeyay ee W, waa mashiin awood u leh inuu keeno awood badan hadii uusan ahaan laheyn hawo yar oo ciriiri ah. Way i qancineysaa, inaad heshay mashiinno sidan oo kale ah oo aysan lahayn wax gariir ah. Eeg shilimaadka uu ku rido mootada. Sida Patelo u leeyahay, heerka gariirku wuxuu go'aamiyaa nolosha mashiinka.
Sidee loo sameeyaa mootada guryaha lagu sameeyo ee electrostatic
Hadaad dhistay taada Van der Graaff matoor mana garanaysid waxa aad ku samaynaysid, waxaad u isticmaali kartaa korantada ma guurtada ah ee aad dhaliso inay tahay isha laga helo korantada korantadan.
Waa run inayna ka badnayn xiisaha uun, laakiin waxay noqon kartaa mashruuc cilmiyeed wanaagsan, koronto-dhaliye + koronto-dhaliyaha korantada. Xitaa samee a Qalabka elektaroonigga inaad ku biirto xirmada tijaabooyinka electrostatic :)
Stepper motor kicinaya
In yar oo yar iyo maqaal maqaal ah waxaan ku kordhineynaa geeskeena yar matoorrada walaaqaya.
Markan waxaan ka helnay maqaal leh faahfaahin faahfaahsan oo ah mashiinka Stirling LTD ee makezine (iskuxirahu wuu jabay) nasiib wanaag waan haysannaa waxyaabaha ku jira. Mashiinkaani waa LTD, oo macnaheedu yahay in loogu talagalay inuu la shaqeeyo kala duwanaanta heerkulka yar.
Waxaan haynaa hage dhammeystiran oo ku saabsan mashiinnada Stirling, haddii aad rabto inaad dhex gasho adduunkan xiisaha leh waa wax aad u xiiso badan inaad sidoo kale wax yar ka barato taariikhdeeda, sababta ay u shaqeeyaan, waxa wareegtoodu yihiin, noocyada jira iwm.
Dhisida mishiinka kiciya.
Waa mashiin ay tahay inaad si taxaddar leh u eegto dhismihiisa. Maaha wax aad u adag in la soo saaro, laakiin haddii aan ka taxaddarno waxaan heli doonaa qalliin dheecaankiisu ka sii badan yahay.
Sida aad ku arki karto sawirka, waa mishiin nooca
Mashiinka Joogtada ah
Hadda waxaan kuu keenayaa khariidadan oo aan ka helay Bogga John Bedini. Mashiinkaan, sida ku muuqata ... Akhri akhriska
Bediniye tamarta dhaliyaha
Isu soo baxa Bedini waxaa xigay Jim Watson, oo ah saynisyahan cilmi baaris ah oo ku nool Colorado, Springs. Watson wuxuu soo bandhigay laba qalab oo shaqeynaya oo la mid ah kii John Bedini. Qalabka ugu yar ee Watson ayaa shaqeeyay inta lagu gudajiray soo bandhigga dhagaystayaashuna waxay arkeen in batteriga uu si joogto ah dib u buuxinayo. Aaladda ugu weyn, oo culeyskeedu ahaa 800 rodol, ayaa la soo saaray oo keliya 10 daqiiqo sababo la taaban karo awgood. Inta lagu jiro waqtigan, xamuul joogto ah 12kw ayaa laga saaray aaladda. Qalabkan ayaa waxaa ku shaqeynayay labo batariyada baabuurta oo dhan 12v.